China T-bolt clamp Manufacturer and Factories | Glorex
FANAOVANA MAIMAIMPOANA REHETRA MBHNELL REHETRA
Fiakarana hosotra amerikana
Famenon-tsonia vita anglisy
Ny karazana fifamenan'ny hosotra any Alemana
Ny fitaovana akora
Ny clamp T-bolt dia karazana clamp ampiharina amin'ny fanamafisana fantsona silicone matevina. Ny fantsom-pifandraisana ankehitriny dia ananantsika: 19, 20, 26, 32, 38.
Ny fametahana T-bolt dia manome tombo-kofehy tsara sy azo itokisana amin'ny fanerena fanamiana tsy miovaova sy maharitra ary misy fahatoniana tsara.
Stencil fanoratana na laser soratra.
Ny fonosana mahazatra dia harona plastika, ary ny boaty ivelany dia baoritra.Toa misy marika amina boaty. Papiitra miavaka (boaty fotsy tsotra, boaty kraft, boaty loko, boaty plastika, sns).
Manana rafitra fanaraha-maso feno sy fenitra kalitao tsara kokoa isika. Ny fitaovana fanaraha-maso marina sy ny mpiasa rehetra dia mpiasa mahay izay manana fahaiza-manao fisavana tsara. Ny tsipika famokarana tsirairay dia miaraka amin'ny inspektera matihanina.
Ny orinasa dia manana fiara fitateram-pitaterana marobe, ary nanorina fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny orinasam-pifandraisana lehibe, seranam-piaramanidina Tianjin, seranam-piaramanidina Xingang sy Dongjiang, mamela ny entana entinao hamonjy ny adiresy voatondro ho haingana kokoa noho ny taloha.
Ny clamp T-bolt dia ampiasaina betsaka amin'ny fantsom-pifandraisana avo lenta sy amin'ny faribolana lehibe toy ny kamiao mavesatra, indostrian'ny fiara, fiara, fanondrahana fambolena sy milina.
Ny tombony azo amin'ny kilasy voalohany:
Ny clamp T-bolt dia mampiasa ny rafitra sy ny dingana vita amin'ny famokarana hamenoana ny filàn'ny karazana sela sy fantsona vy. Izy ireo dia manana tanjaka feno, fampiasana tsara ary hery fanamafisana matanjaka.
pcs / baoritra
habe baoritra (cm)
Previous: Fametahana lohalika
Manaraka: Famotsoran-tsakaoka tsy miandalana amin'ny Uniaural
Tafio matevina miaraka amina trunnion matevina
Fametahana mateza miaraka amin'ny bolts roa
T-bolt amin'ny clamp lohataona